Red's Rose Dream: October 2007
Posted by Red's Rose Dream at 09:09
ကျွန်မငယ်ငယ်ကနေတဲ့အိမ်နားမှာ ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတယ်လို ပြောကြတဲ့အိမ်တစ်အိမ်ရှိပါတယ်။ အိမ်နားမှာ ဆိုတာထက် အိမ်ဘေးမှာနေတာပိုပြီးမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာလည် နေတဲ့သူက၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့။ ကျွန်မတို့ရောက်စက နေတဲ့မိသားစုကတစ်နှစ်လောက်နေတော့ ပြောင်းသွားတယ်။ နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ လူကလည်း မိသားစုလိုက်ကရန်ကုန်မှာနေတာပါ။ အားလပ်ရပ်လောက်ဘဲ လာလည်ကြလို့ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးက လူမနေတဲ့အိမ်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရောက်ခါစက အဲဒီအိမ်မှာနေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကပြောတယ် သူ့သမီးအငယ်လေး နေမကောင်းဖြစ်လို့ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ သိပ်ထားတုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာနှိုးလို့တဲ့။ ကောင်မလေးနိုးလာတော့ ညီမလေးမမတို့နဲ့ လိုက်မလားလို့မေးပါတယ်တဲ့။ သူကမလိုက်ဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ အဲဒါဆိုလည်းမမတို့ ဒီမှာခဏ နေမယ်နော် ဆိုပြီး သူ့အဖေါ်တွေကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့အဖေါ်ကလေည်း ခုနှစ်ယောက်တောင်မှ၊ ပုဂံခေတ်ကလို အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ထားပါတယ်တဲ့။ ပြီတော့အိမ်အပေါ်ထပ်က စတိုခန်းထဲ ကိုဝင်သွားပါသတဲ့။ တစ်ခါတလေ အဲဒီအဒေါ်ကြီးရဲ့ အဖေကိုလည် တရားထိုင်နေရင် ခြေထောက်တွေလာ ဆွဲလို့ဆွဲ လုပ်ပါသတဲ့။ အိပ်နေရင်လည်း အိပ်လို့မရအောင် နှောက်ယှက်တက်ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီအိမ်က အစ်ကိုကြီးတွေ ဂစ်တာတီးရင် ဥစ္စာစောင့်တွေကစောင်းသံပေးပါသတဲ့။ ဂစ်တာသံမရပ်မချင်း စောင်းသံလည်း မရပ်သွားတက်ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီလောက်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့အိမ်ပါ။ အဲဒီ့အိမ်မှာနေတဲ့ အဒေါ်ကြီးတွေပြောင်းသွားတော့ နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ သူကလည်း အဲ့ဒီ့အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးတွေ လာလုပ်၊ မီးတွေဘာတွေဆင်၊ ကျွန်မတို့အိမ်ကိုလည်း သူ့အိမ်ကိုကြည့်ပေးဖို့အပ်ပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအိမ်မှာလူမနေတာကျွန်မတို့အသိပါ။ အိမ်ရှင်ဦးလေးကြီးက အိမ်ရှေ့မီးနဲ့ နောက်ဖေးမီးကို ညဖက်မှာ သူခိုးအလွယ်တကူ မကပ်နိုင်အောင် အမြဲထွန်းပေးထားပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ အိမ်မှာမုန့်လုပ်စားဖြစ်လို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေရော သူ့အမေတွေပါရောက်နေလို့ လူအတော် စုံနေတဲ့ အချိန်မှာပါ။ အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်း ပြောတုန်းက အိမ်ရှေ့မီးတွေဖွင့်ထားတုန်းပါ။ အားလုံးဘဲ စကားလက်စုံကျနေရာကနေ သတိရလို့အဲ့ဒီ့ အိမ်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်အောက်ဘက်ကမီးတွေအားလုံးပိတ်နေပြီး အပေါ်ထပ်ကမီးတွေ အားလုံးပွင့် နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အော် အားလုံးကလည်း သတိမထားမိလို့နေမှာဘဲပေါ့။ ခဏလောက် နေတော့ နောက်ထပ်တစ်ခေါက် ကြည့်ဖြစ်ကြပြန်ပါရော။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ အပေါ်ထပ်က ကျွန်မတို့အိမ် ဘက်က အခန်းတွေနဲ့ အောက်ဘက်အိမ်ရှေ့နဲ့အိမ်နောက်ဘက်မီးတွေပြန်လင်းနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလေးတွေ ရော လူကြီးတွေရော အားလုံးကြောင်သွားပြီး။ ကလေးတွေကတော့ အော်တဲ့သူကအော် ပြေးတဲ့သူကပြေးနဲ့ အတော်လေးဆူညံသွားပါတယ်။ အားလုံးကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတာကို။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေလည်း တော်ပီပြန်
ဥစ္စာစောင့်များက သူတို့အကြောင်းပြောရင် ဘယ်နေရာပြောပြော ကြားရတယ်လို့ပြောကြလို့နောက်ပိုင်းကို အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းပြောဖြစ်ရင် ချောင်းခြားမြစ်ခြားဆိုပြီး အရင်ပြောပြီးမှဘဲ အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်း ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်းဥစ္စာစောင့် ဆိုရင်တော့ချောမှာဘဲ တစ်ခါလောက်တော့မြင်ဖူးတယ် ရှိအောင်လို့ နဲနဲအကဲစမ်းကြည့်ရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး၊ ညဘက်တွေမှာ သူတို့အိမ်ဘက်လှည့်ပြီး စကားနည်းနည်းပါးပါး ပြောကြည့်ပါတယ်။ အဲ ကျွန်မစကားပြောလို့ပြီးသွားရင် အဲဒီအိမ်ဘက်အိမ်ခန်းတွေကမီးတွေ တစ်ခန်းပွင့်လိုက်၊ တစ်ခန်းပိတ်လိုက်နဲ့ အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တော့လည်း သိပ်ပြီးမကြောက်တော့ပါဘူး အဲဒီအိမ်ကြီးကို။
တစ်ခါကလည်း ကျွန်မတို့အိမ်ကို အလည်လာတဲ့ နယ်ကကျွန်မအဒေါ်တစ်ယေက်လည် အစခံရပါတယ်။ သူကတစ်ရေနိုးလို့ အိမ်သာထသွားတာ အဲ့ဒီအိမ်ဘက်မှာ ဆံပင်ဖားလျှားနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေတာတွေဆိုပြီး ညကြီးအချိန်မတော် ထပြီးအော်လို့ တစ်အိမ်လုံးဆူညံသွားပါရော။ အဒေါ်က ကြောက်တက်တော့ အော်ပြီးငိုပါရော၊ သူတစ်ယောက်တည်း မအိပ်ရဲတော့ဘူး ငါနဲ့တစ်ယောက်ယောက် လာအိပ်ဆိုပြီးပြောလို့ ကျွန်မသွားအိပ်ပေးရသေးတယ်။ အဒေါ်မအိပ်ရဲရင် ဟိုဘက်အိမ်ကတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးအိပ်ပါလားလို့ ပြောလို့ ကျွန်မခေါင်းအခေါက်ခံလိုက်ရသေးတယ်။
ကျွန်မတို့ဆီမှာ အိမ်အပ်ထားတဲ့ဦးလေးကြီးက သူအဲ့ဒီအိမ်မှာ မနေဖြစ်တော့လို့ အိမ်ကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီ သိပ်မကြာခင် အဲဒီအိမ်ကိုနောက်ထပ် အိမ်ရှင်အသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ အိမ်ရှင်အသစ်က အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်း အတော်သိထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ သူကအဲ့ဒီအိမ်က စတိုခန်းထဲက ဥစ္စာစောင့်တွေကို နင်တို့ကိုလည်းငါမနှာက်ယှက်ဘူး ငါ့တို့ကိုလည်းမနှာက်ယှက်နဲ့လို့ပြောပြီး အိမ်နောက်ဘက်
မှာရှိတဲ့ အိမ်သာနားကတဲထဲမှာ နေရာပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့လည်း အဲ့ဒီတဲကို လုံးဝမသုံးတော့ပါဘူး။ တဲရှိတဲ့ ဘက်ကိုတော့မီးထွန်း ပေးထားပါသေးတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အဲ့ဒီတဲဘက်က မီးကပိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက်လုပ်တက်သလို၊ တဲထဲကနေ အိမ်မကြီးဘက်ကိုကူးလာတဲ့ လူအရိပ်တွေလည်း တွေ့ရတက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်ကတော့ နောက်ပိုင်းကြာလာတော့ အဲဒါတွေမထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
အရင်တစ်ခါက အခြောက်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ ညဘက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အိမ်ဘက်ကို ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်လာမလည်တော့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကို အဲ့ဒီ ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ အိမ်မှာဘယ်သူမှမနေရဲလို့ အဆောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့လည်း ပြောသံကြားပါတယ်။ ယောက်ျားလေးအဆောင်
လုပ်တာဆိုတော့ ကောင်လေးတွေခဏခဏ အခြောက်ခံရတယ်လို့လည်းပြောသံကြားပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခြောက်တဲ့သူက ဥစ္စာစောင့်ဆိုတော့ ချောချောလေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မကတော့ ဥစ္စာစောင့်
မြင်ဖူးချင်လို့ ခဏခဏချောင်းပေမယ့် မြင်ခွင်မကြုံသေးလို့ထင်ပါရဲ့ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။
(မှတ်ချက်။။ အဲဒီအိမ်ကြီးမှာအရင်က အိမ်ရှင်လက်လွန်သွားလို့ အိမ်ဖော်ကောင်မလေး တစ်ယောက်သေဖူးတယ် လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဥစ္စာစောင့်ရယ် ကောင်မလေးရယ်ပေါင်းပြီး ယောက်ျားတွေဆိုပိုပြီးခြောက် ပါသတဲ့။)
Posted by Red's Rose Dream at 00:19
ဒီနေ့ ဆောင်းဦးရွက်ကြွေချစ်သက်သေ ကားကိုကေဘီအက်(စ်) ကနေပြန်လာလို့ ကြည့်မိပါတယ်။ သနားစရာ
ချစ်ပုံပြင်လေးကို ပြန်ကြည့်တော့ ငိုချင်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ဝင်တေးနဲ့ တစ်ခြားကိုရီးယားကားတွေမှာ ပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေကို ကျွန်မကြိုက်လို့ ၀ယ်ထားတာရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလိုချင် မလားလို့တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
အမျိုးသားဆိုထားတဲ့သီချင်းပါ။ ဖွင့်လို့ရမရပြောပေးပါ။ မရရင်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။
Posted by Red's Rose Dream at 09:06
သူ့ရဲ့အရေးအသားလေးကိုကြိုက်တာလည်းပါတယ်။ ကဗျာလေးကို ခံစားလို့
ရတာလည်းပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မှတ်စုလေးထဲသိမ်းထားချင်တာလည်းပါတယ်။
ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့မှ ဘ၀အမောတွေ ပြေမယ်ဆိုရင်
တီတီတာတာ ပလီပလာပြောမှ ချစ်သူဖြစ်ကြေးဆိုရင်
ငါလိုချင်တာ စကားလုံးမဲ့ အချစ်စစ်တခုဘဲ............
ဖုန်းတွေအမြဲဆက် မေးလ်တွေ အမြဲပို့မှ အချစ်တွေနွေးမယ်ဆိုရင်
ငါလိုချင်တာ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ထပ်တူကျမယ့် နှလုံးသားတစ်စုံဘဲ........
နင့်အချစ်တွေ မရိုးအီဖို့ ပုံရိပ်တွေ ပြောင်းလဲမှ ရမယ်ဆိုရင်
တသက်လုံးသာ အချစ်တွေ ရိုးအီပါစေတော့........
ငါလိုချင်တာ ပြောင်းလဲစရာ မလိုတဲ့ ငါ့ပုံရိပ်အဟောင်းဘဲ.........
ငါနဲ့လမ်းခွဲမှ အချစ်စစ်ဆိုတာ နင်နားလည်မယ်ဆိုရင်
ငါလိုချင်တာ အချစ်စစ်ကို နင်နားလည်မယ့်နေ့ဘဲ...................
Posted by Red's Rose Dream at 07:59
ရေးချင်တာတွေများနေလို့ ခေါင်းထဲမှာစဉ်စားနေတာခေါင်းကိုပူနေတာပါဘဲ။ ရေးဖို့ဝင်လာတိုင်း စဉ်းစားထားတာ တွေ ထဲကဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီအတိုင်းပြန်ထွက်သွားတာလည်း ခဏခဏပါဘဲ။ ဒီနေ့ ကျွန်မကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကျွန်မကို မဂ္ဂဇင်းမှာထည့်ခိုင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်တင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ကောင်လေး
နဲ့ပက်သက်ပြီးရေးထားတာပါ။ ကျွန်မဇာတ်လမ်းအစအဆုံးသိနေလို့ ခံစားလို့ရသလို၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကို
ပေးပြီးဖတ်တော့လည်း ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ အစကကဗျာကို ကြိုက်လို့အလွတ်ကျက်ထားပေမယ့် အခုတော့ အချို့တ၀က်မေ့သွားပြီး။ ကဗျာလေးကဒီမှာ..
ကဗျာဆရာက သူ့ကဗျာလေးကို အလှဆုံးရေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မက ကျွန်မရွတ်ဆိုတက်သလို ပြန်ရေးထားလို့ ကာရန်မညီခဲ့ရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ။
Labels: ကဗျာ, စပ်မိစပ်ရာ
Posted by Red's Rose Dream at 09:20
ဒီသီချင်းလေးကို ဒီနေ့မှစပြီးနားထောင်ဖူးတာပါ။ သီချင်းလေးကအတော်လေးကို လွမ်းဖို့ကောင်းအောင်ဖမ်းစား နိုင်ပါရဲ့။ ကျွန်မအကြိုက်မျိုးကြီးသီချင်းလေးပါ။ သီချင်းလေးက မလာပါနဲ့တဲ့။ You Tube ကနေကူးပြီးတင်ထား
Posted by Red's Rose Dream at 11:43
ကျွန်မတွင်အလွန်ဆိုးရွားသောအကျင့် တစ်ခုရှိပါသည်။ အဲဒီအကျင့်ကြောင့် အတော်လေးဒုက္ခများဖူးပါတယ်။ အဲဒီအကျင့်ကတော့ ဘယ်တော့မှခေါင်းစဉ်ကိုမဖတ်တဲ့အကျင့်ပါ။ အလေးမထားလို့ မဟုတ်ရပါဘူး။ အထဲကစာတွေ အကုန်နီးပါးမှတ်မိချင်မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ သူပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ အကုန်ရချင်ရနေ ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မကတော့ ခေါင်းစဉ်ကိုမှတ်မိဖို့အတော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မကျောင်းမှာ တုန်းက သမိုင်းတွေအသေအလဲကျတ်ပြီး စာတွေရလို့နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မခေါင်းစဉ်ကို ကျတ်ဖို့မေ့သွား
တာကျွန်မကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပါဘူး။ စာမေးပွဲခန်းထဲကိုရောက်တော့ မေးခွန်းစာရွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှ
ကျွန်မခေါင်းစဉ်တွေမကျတ်ခဲ့ဘူးမှန်း သတိရလိုက်တယ်။ အတော်ကိုဆိုးပါတယ်။ မေးခွန်ကိုကြည့်ပြီး မှန်းဖြေလိုက်ရပါတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့စာမေးပွဲအောင်လို့။
စားစီစာကုံးရေးရင်လည်း ခေါင်းစဉ်ကအချုပ်ဆိုတော့ ကျွန်မအတွက်အခက်တွေ့ပြန်ပါရော။ ကျွန်မဘောင်ခတ် ထားတာတို့၊ ကန့်သတ်ထားတာတို့ဆိုသိပ်ပြီးမုန်းတာကြောင့် စာစီစာကုံးကို သိပ်ပြီးမုန်းပါတယ်။ ဆယ်တန်း တုန်းကလည်းတွေ့ သမျှစာစီစာကုံးတွေကို အကုန်ဖတ်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှမလေ့ကျင့်ဘူး ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အောက်မှာ။
ဘလောဒ့်ရေးတော့လည်း ဘယ်တော့မှခေါင်းစဉ်ကိုအရင်မရေးတက်ပါဘူး။ ရေးချင်တာရေးပြီးမှ ခေါင်းစဉ်တပ် လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျင့်က ကျွန်မအတွက်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဝေးစေတဲ့အချက်မှန်းကျွန်မသိပေမယ့် ပြင်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ အတော်ဆိုးပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲကသာမပါရင် ဘာမှလိုပ်လို့မရတဲ့ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို မုန်းမိပါရဲ့။
ဘလောဒ့်တွေကို လျှောက်လည်ပြန်တော့ဘယ်တော့မှ ဘလောဒ့်နာမည်တွေကို မမှတ်မိပြန်ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ Notepad ထဲမှာကိုမှတ်ထားရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သူများSideတွေထဲမှာ လင့်တွေလိုက်ရှာပြီးမှ ၀င်ကြည့်ရပါတယ်။ ကိုရန်အောင်လောက်လွယ်တဲ့နာမည်တောင် ကျွန်မ၀င်ကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ မှန်အောင်လို့ အတော်လေးကျတ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သိပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကိုအရမ်းမုန်းပါတယ်။
Posted by Red's Rose Dream at 13:42
သူကသီချင်းလေးတွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဆိုတက်တဲ့အဆိုတော် ဖြစ်ရုံသာမက သူ့အသံလေးက ယောက်ျားလေးအသံနဲ့မတူအောင်ကို နုညံ့သိမ်မွေ့နေတက်ပါတယ်။ သူ့သီချင်းလေးတွေက အဓိပ္ပယ်တစ်ခုခုကို ပြောနေသယောင်ယောင်။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေ နာထောင်ပြီးရင် ရင်ထဲမှာတကယ်ကို လွမ်းဆွေပြီးကျန်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ချိုသာလွန်းတဲ့ အသံပိုင်ရှင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို နားမထောင်ဘဲမနေနိုင်အောင် ပါဘဲ။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း သူ့ရဲ့သီချင်းအေးအေးလေးတစ်ပုဒ်ထဲက တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ နားထောင်ပြီးရင်တော့....
ဘယ်သူကိုမှ သွားပြီးသတိမရပါစေနဲ့။ သီချင်းနာမည်က ရင်မှာပါတဲ့။
ကန်တော်ကြီး သီချင်းလေးကိုကြားရင် ဘာမှန်းမသိဘ။ဲ လွမ်းသလိုလို၊ ဆွေးသလိုလို၊ ပျော်သလိုလိုပါဘဲ။ မျိုးကြီးသီချင်းတွေကိုလည်း နှစ်သက်တဲ့သူမို့လည်း ပါမှာပါ။ မျိုးကြီးရဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာလည်း ဒီသီချင်းလေးက အတော်လေးလည်း ပေါက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အလှဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်နေရာဖြစ်တဲ့ ကန်တော်ကြီးကလည်း ကျွန်မအကြိုက်ဖြစ်တာမို့ အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင် ဒီသီချင်းလေးကို ပိုစ့်အသစ်နေနဲ့ တင်ထားလိုက်တာပါ။ Iron Corss ကထွက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေအားလုံးကို ကြိုက်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးများကို စုစည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ ဒီမှာပါ။
Posted by Red's Rose Dream at 11:52
Someone say I am foolish,
Someone say I am stupid,
Someone say I am greedy,
Someone say I am selfish,
Yeah, I am suchabad girl,
But, I am still alive on this earth.
I am honestly foolish,
I am honestly stupid,
I am honestly honesty,
I am honestly greedy,
I am honestly honest,
I am still walk on this earth.
But I don't know how to be happy.
But I don't want to give love.
But nobody need my help.
But I don't know how can I do to be rich.
But I am still alive on this earth,
without nothing that I want.
Till I am still alive,
Labels: ကဗျာ, ယာယီ
Posted by Red's Rose Dream at 09:15
ကျွန်မကြိုက်တဲ့ နတ်သမီးသီချင်းကို အဆိုတော်နောက်တစ်ယောက် စန္ဒယားနဲ့ ဆိုထားတာကို You Tube ကနေ ကူးထားတာပါ။
Posted by Red's Rose Dream at 16:30
၁၉၈၂-------------------------၀က်သား ၁ ပိဿာ ၂၅ကျပ်။
၁၉၉၃-------------------------၀က်သား ၁ ပိဿာ ၁၀၀ကျပ်။
၂၀၀၄-------------------------၀က်သား ၁ ပိဿာ ၃၅၀၀ကျပ်။
၂၀၀၀-------------------------ငါးခူ ၁ ပိဿာ ၄၀၀ကျပ်။
၂၀၀၆-------------------------ငါးခူ ၁ ပိဿာ ၄၅၀၀ကျပ်။
၂၀၀၀-------------------------ငါးကြင်း ၁ပိဿာ ၂၀၀ကျပ်။
၂၀၀၆-------------------------ငါးကြင်း ၁ပိဿာ ၂၅၀၀-၃၀၀၀ကျပ်။
၁၉၉၃-------------------------ကြက်ဥ ၁လုံး ၅၀ပြား။
၂၀၀၃-------------------------ကြက်ဥ ၁လုံး ၁၅ကျပ်။
၂၀၀၇-------------------------ကြက်ဥ ၁လုံး ၁၅၀ကျပ်။
၁၉၉၅-------------------------ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၁ပွဲ ၂၅-၃၀ကျပ်။
၂၀၀၀-------------------------ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၁ပွဲ ၁၀၀-၁၅၀ကျပ်။
၂၀၀၆-------------------------ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၁ပွဲ ၃၅၀-၅၀၀ကျပ်။(သွားသောဆိုင်ပေါ်မူတည်ပါသည်။)
၁၉၈၈-------------------------၀က်သားတုတ်ထိုး ၅မူးဖိုး ၃ချောင်း။
၁၉၉၃-------------------------၀က်သားတုတ်ထိုး ၁၀ဖိုး ၅ချောင်း။
၂၀၀၀-------------------------၀က်သားတုတ်ထိုး ၁၀၀ဖိုး ၅ချောင်း။
၂၀၀၆-------------------------၀က်သားတုတ်ထိုး ၁ချောင်း ၂၅-၅၀ကျပ်။
၁၉၉၆-------------------------ခေါက်ဆွဲကြော် ၁ပွဲ ၈၀-၉၀ကျပ်။(ဆိုင်ကောင်းကောင်း)
၁၉၉၈-------------------------ခေါက်ဆွဲကြော် ၁ပွဲ ၁၀၀-၁၅၀၀ကျပ်။
၂၀၀၁-------------------------ခေါက်ဆွဲကြော် ၁ပွဲ ၅၀၀ကျပ်။
၂၀၀၆-------------------------ခေါက်ဆွဲကြော် ၁ပွဲ ၉၀၀-၁၀၀၀ကျပ်။
၂၀၀၁-------------------------ခရမ်းချဉ်သီး ၁ပိဿာ ၆၀ကျပ်။
၂၀၀၆-------------------------ခရမ်းချဉ်သီး ၁ပိဿာ ၅၀၀-၈၀၀ကျပ်။
၁၉၉၉-၂၀၀၀-------------------------ပိတ်စ(လုံချည်) ၁ကွင်း ၁ကိုက် ၁၅၀-၂၀၀ကျပ်။
၂၀၀၁---------------------------------ပိတ်စ(လုံချည်) ၁ကွင်း ၁ကိုက် ၅၀၀-၁၅၀၀ကျပ်။
၂၀၀၆---------------------------------ပိတ်စ(လုံချည်) ၁ကွင်း ၁ကိုက် ၂၅၀၀-၅၀၀၀ကျပ်။
၂၀၀၀---------------------------------ပတ်စပိုစ့်ဓါတ်ပုံ ၄ပုံ ၁၅ကျပ်။
၂၀၀၁---------------------------------ပတ်စပိုစ့်ဓါတ်ပုံ ၄ပုံ ၁၀၀ကျပ်။
၂၀၀၆---------------------------------ပတ်စပိုစ့်ဓါတ်ပုံ ၄ပုံ ၅၀၀ကျပ်။
၁၉၈၈---------------------------------စက်ဘီး ၁စီး ၁၅၀-၂၀၀ကျပ်။(အသစ်)
၂၀၀၁---------------------------------စက်ဘီး ၁စီး ၃၀၀၀၀ကျပ်။(အသစ်)
၂၀၀၆---------------------------------စက်ဘီး ၁စီး ၁၅၀၀၀၀ကျပ်။(အသစ်)
၁၉၉၃---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၁၅၀၀၀ကျပ်။(၁၅ပဲရည်)
၁၉၉၆---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၂၀၀၀၀-၂၁၀၀၀ကျပ်။(၁၅ ပဲရည်)
၂၀၀၀---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၅၀၀၀၀ကျပ်။(၁၆ပဲရည်)
၂၀၀၂---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၁၀၀၀၀၀ကျပ်။(၁၆ ပဲရည်)
၂၀၀၄---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၂၃၀၀၀၀ကျပ်။(၁၆ ပဲရည်)
၂၀၀၆---------------------------------ရွှေ ၁ကျပ်သား ၄၅၀၀၀၀ကျပ်။(၁၅ ပဲရည်)
ပထမတန်း----------------------------မုန့်ဖိုး ၁ရက် ၂၅ပြား။
ပဉ္စမတန်း-----------------------------မုန့်ဖိုး ၁ရက် ၅ကျပ်။
ဒဿမတန်း---------------------------မုန့်ဖိုး ၁ရက် ၁၀၀ကျပ်။
၂၀၀၀---------------------------------မုန့်ဖိုး ၁လ ၃၀၀၀ကျပ်။ (အ၀တ်အစား ၀ယ်နိုင်ပါသေးသည်။)
၂၀၀၂---------------------------------မုန့်ဖိုး ၁လ ၁၅၀၀၀ကျပ်။(မနည်းကိုလောက်အောင်သုံးရပါသည်။)
၂၀၀၆---------------------------------မုန့်ဖိုး ၁လ ၃၀၀၀၀ကျပ်။(အသုံးအဆောင်နှင့် အ၀တ်အစားဖိုးကို အိမ်မှပြန်တောင်ရပါသည်။)
အထက်ပါဈေးနှုန်းများမှာ ကျွန်မအမှတ်တရ ရှိခဲ့သောဈေျးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းများမှာ ကျွန်မမှားယွင်းစွာမှတ်သားထားသည်များလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမှား အယွင်းများကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန် အနုအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ကျွန်မ ၃-၄နှစ်သမီးမှာ မုန့်စ၀ယ်စားတက်ပြီး၊ မုန့်ဖိုးများကို အိမ်ကလိုက်ရှင်းပေးပါသည်။ ပထမနှစ်မှစ၍ မုန့်
ဖိုးစရပါသည်။ ကျွန်မအိမ်မှ ပြင်ပတွင်မုန့်ဝယ်စားခြင်းကို ခွင့်မပြုသောကြောင့် ဒဿမတန်းရောက်မှ၊ မုန့်ဈေး
တန်းမှာ စ၍မုန့်ဝယ်စားဖူးပါသည်။ တခါတလေ မုန့်ဝယ်စားလေံမရှိဘဲ စုထားတက်ပြီး၊ ကျွန်မကြိုက်သော သေးသေးသောသေား ပစ္စည်းများနှင့် စာအုပ်များကို ၀ယ်၍စုဆောင်းတက်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်စတက်ချိန်တွင် ကျွန်မသောထွေထွေအသုံးစရိတ် (၃၀၀၀)မှ အ၀တ်အစားများ၊ အသုံးဆောင်
များဝယ်၍ သုံးနိုင်ရုံသာမက၊ တခါတလေပိုတက်သော်လည်း။ ကျောင်းပြီးချိန်ရသော အသုံးစရိတ် သုံးသောင်း
Labels: စပ်မိစပ်ရာ, ကြားဖူးနားဝ
Posted by Red's Rose Dream at 15:34
ကျွန်မဘ၀မှာ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးအစားအစားတွေကို ကြိုက်ရဲ့သားနဲ့မစားဖြစ်တာတွေအများကြီးပါ။ လူတွေ အတော်များများလည်းဒီလို အဖြစ်လေးတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မျှစ်ကို ပဲပြုတ်နဲ့ကြော်တာကို ကျွန်မအလွန် ဘဲကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်စားလျှင် ဆံပင်ကျွတ်လွယ်တယ်ဆိုလို့ မျှစ်ကြော်စားတာကို ကျွန်မဖြတ် ထားခဲ့တာ (၁၀)နှစ်နီပါလောက်ရှီပါပြီ။ မျှစ်မစားတာဘာထူးဆန်းလဲလို့ မေးရင်ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး။ ကျွန်မ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရတာ အစမှအတော်လေးကို ကသိကအောက်ဖြစ်ပေမယ့်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နေသားကျသွားပါတယ်။ ဒါအဲပြင် ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်ပူပူလေးကို ထမင်းနဲ့တွဲစားရ တာလည်း ကျွန်မနှစ်သက်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်ရွက်က ကျွန်မအဖေနဲ့ မတည့်လို့အိမ်မှာ ကြော်မစား ဖြစ်တာလည်း ဆယ်နှစ်ကြော်ပါပြီ။ တစ်ခါတလေ ဟင်းနုနွယ်ကို ဈေးမှာတွေ့ရင်တောင် စားလို့ရတယ်လို့ မထင်သလို၊ ၀ယ်စားလို့ရတဲ့အစားအစာ အဖြစ်လည်းမမြင်တော့တဲ့အထိကို ကျွန်မနဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်နဲ့ တစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
မှတ်မှတ်ရရ ချောကလတ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မကို၊ ကျွန်မအဖေက သူခရီးတဲ့နေရာကနေ ချောကလတ်တွေ
အများကြီးဝယ်လာတော့၊ စိတ်ကြိုက်စားပြီး ပေါင်ချိန်တွေတိုးသွားပြီး အတော်နဲ့ပြန်မကျလို့ စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာ
ကြောင့် ကျွန်မချောကလတ်မစားဖြစ်တာ (၅)နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာတော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မမသိ အောင်ခိုးစားတာတွေကိုတော့ ထည့်တွက်မထားပါဘူး။
အဲ.. ရေခဲမုန့်။ ရေခဲမုန့်ကတော့ အသေအလဲကိုကြိုက်တာ။ ရေခဲမုန့်လည်း စားပြီးရင်အနည်းဆုံးတော့ (၁)ပေါင်
လောက်တက်တာ။ ရေခဲမုန့်ကလည်း မစားဖြစ်တာ ရန်ကုန်ရောက်ကတည်းကဆိုတော့ (၅)နှစ်လောက်ရှိပြီ။
မန္တလေးမှာတုန်းကတော့ ကုန်းထက်မှာတော့သွားစားဖြစ်တယ်။ ဒီရောက်ပြီးမှ ရေခဲမုန့် (၅)ခုကို ၃လအတွင်း မှာစားမိလို့ (၁၀)ပေါင်လောက်တက်သွားတယ်။ အစာအငတ်ခံပြီး ၀ိတ်ပြန်ချတာ အခုတော့ပြန်ကျသွားပြီ။ အရက်သမား အမူးပြေရင် ထန်းပင်မော့ ကြည့်တယ်လို့ဆိုသလို။ ခု.. ရေခဲမုန့်ပြန်စားနေပြီ။ ခုတောင်ရေခဲမုန့်
ဒညင်းသီးက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မတဲ့လို့မစားဘူး။ ဒညင်းသီးစားတဲ့သူကိုလည်း သိပ်ပြီးမုန်းတယ်။
ငရုပ်သီးကို အစိမ်းလုံးဝမစားဘူး။ အတောင့်လိုက်လည်း မစားဘူး။ ငရုပ်သီးမှုန့်ကိုလည်း မုန့်ဟင်းခါးထဲကိုထည့်
မစားတက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ငပိထောင်းစပ်စပ်တို့၊ ငရုပ်သီးကြော်၊ ငပိရည်ငရုပ်သီးစပ်စပ် ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်
ပါတယ်။ စပ်မှာမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ပါစပ်ထဲကို အလွယ်တကူထည့်ရမှာကြောက် နေမိလို့ပါ။
ကြက်သွန်နီကြော် ကျွတ်ကျွတ်လေးတို့၊ ပါးပါးလှီးပြီး အသုတ်ထဲထည့်စားရတာတို့ကို ကြိုက်ပေမယ့်၊ ငရုပ်ဆီနဲ့ ရောထားတာကိုမကြိုက်ပါဘူး။ ကြက်သွန်နီ အစိမ်းကိုစားရင်အန်ချင်လို့ပါ။
ငယ်ငယ်က ပီကေစားရတာကိုကြိုက်ပေမယ့် ပီကေထဲမှာပီကေစွဲအောင် ဘိန်းတွေထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ ပီကေ
ကို မူကြိုကတည်းကဖြတ်ပြစ်လိုက်တာ အခုအထိပါပဲ။ တခါတလေ စားတာတွေကိုထည့်တွက်မထားပါဘူး။ စား
နေကျ အစားအစာတွေထဲမှာ ထည့်တွက်မထားဖြစ်ဘူးပီကေကို။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေ ချစ်သူရွေးရင်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရှာရင် ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ထည့်ပြီး စဉ်းစားလေ ကြမလားရယ်လို့ အဆီမဆိုင်ကျွန်မခေါင်းထဲကို ဘယ်နေရာကနေအတွေး ရောက်လာမှန်းမသိပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာတွေက ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်တော်လို့ စားခွင့်မရှိတဲ့သူတွေလို၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ရည်ရွယ်သူများနဲ့ အဆုံဖြစ်၊ မကြုံဖြစ်ကြတဲ့အခါ....။
အင်း... အချိန်ကြာတော့လည်း ဟင်းနုနွယ်လို၊ မျှစ်လို၊ ပီကေလို ကိုယ့်ရှေ့မှာတွေ့နေမြင်နေတာတောင်မှ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေသွားဖို့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွာရမှာပါဘဲနော်။
ကျွန်မဘလောဒ့်ထဲမှာတင် ထားတဲ့အချို့သောလင့်များ အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။
Astrology Zone ထဲမှာ လစဉ်ဗေဒင်ဟောစာတန်းတွေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
E-Book Download ထဲမှာတော့ အိုင်တီနဲ့ပက်သက်တဲ့ စာအုပ်အတော်များများကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
Japanese Vocabulary ထဲမှာကတော့ ခြေခံဂျပန်စာ ဝေါဟာရလေးများကို အပြင်းပြေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Learning English လို့နာမည်ပေးထားပေမယ့် အမှန်ကတော့ Australia Network ပါ တီဗွီအစီအစဉ်ကို
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ထဲမှာ IELTS စာမေးပွဲဖြေဆို သူများ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ရန် အချက်အလက်များနဲ့ အသံနားထောင်နိုင်တဲ့ ဖိုင် တွေပါ ရယူနိုင်လို့ အတော်လေးကိုဘဲ အထောက်အကူပြုတဲ့ လင့်လေးတွပါ။
Posted by Red's Rose Dream at 10:19
တနေ့မှာ ရွာတစ်ရွာက မီးမဖွားနိုင်လို့ ဆေးရုံသွားဖို့ရေးပေါ်ဌာနသို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပါသတဲ့။
ဖုန်းကိုင်တဲ့သူက မလေးတရုတ်ပါ။ ဖုန်းဆက်တဲ့သူကတော့ မလေးလူမျိုးပါ။ သူတို့ပြောကြတာ
တရုတ်။။ ဟုတ်ပါတယ် အရေးပေါ်ဌာနကပါ။
မလေး။။ ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာမီးဖွားမည့်အရေးပေါ်လူနာရှိလို့ လူနာတင်ကားလွှတ်ပေးဖို့ လှမ်းဆက်တာပါ။
တရုတ်။။ အော်...အင်း..ကောင်းပြီလေ။ ဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ဒါနဲ့ လူနာကယောက်ျားလား၊ မိန်းမလား။
မလေး။။ ဟင် မီးနေသည်ပါဆိုနေမှ ယောက်ျားဖြစ်ပါ့လားဗျာ။။